WDM Module ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China WDM Module စက်ရုံ
လှိုင်းအလျား Multiplex Passive Optical Network Module သည် GPON / XGPON / NGPON2 application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ 1310nm / 1490nm / 1550nm channel တွင်လည်ပတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု●ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်: -5 မှ 75 ℃မှ● Tel ● Telcordia GR-1209-CORE လိုက်ဖက်သော● Telcordia GR-1221-CORE လိုက်ဖက်သော Application မ်ား CWDM စနစ် PON Networ ...
ဤ FWDM အစိတ်အပိုင်းများသည်တိကျသော optical အချက်ပြများကိုခွဲခြားရန်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ရန်ရင့်ကျက်သောပါးလွှာသော interference filter filter ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျယ်ပြန့်သော bandwidth၊ insertion ဆုံးရှုံးမှု၊ အထီးကျန်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ကျမှုတို့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကြောင့်သူတို့သည် optical amplifier, CATV နှင့် FTTH application များအတွက်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●ကျယ်ပြန့်သောလှိုင်းအကျယ်●သွင်းအားနည်းမှုနိမ့်ကျခြင်း●မြင့်မားသောရုပ်သံလိုင်းသီးခြားထားခြင်း●ထူးခြားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများ Opt Optical amplifier iers CATV အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကုန်ပစ္စည်းယူနစ် Parameters မှတ်စုများ။
1310/1490 / 1550FWDM စိတျအပိုငျး
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ●ကျယ်ပြန့်သော bandwidth ●အနိမ့်သွင်းအရှုံး●မြင့်မားသောရုပ်သံလိုင်းအထီးကျန်ခြင်း●ထူးခြားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အသုံးချခြင်းများ။ Optical amplifier မ်ား၊ 0.80 ပြား dB .300.30 အထီးကျန် @ λR dB ≥30ဆိပ်ကမ်း (CR) Reflect ဗဟိုလှိုင်းအလျား lR nm 1550 လှိုင်းအလျားအကွာအဝေး nm 1535 ~ 1620 Insertion Lo ...
Dense Wavelength Division Multiplex Module သည် DWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ 200G channel တွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျားများမှ 1520nm မှ 1620nm အထိလည်ပတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသော● Telcordia GR-1209-CORE လိုက်ဖက်သော● Telcordia GR-1221-CORE လိုက်ဖက်သော● RoHS-6 လိုက်ဖက်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ DWDM စနစ် PON ကွန်ယက်များ CATV ချိတ်ဆက်မှုသတ်မှတ်ချက်များ .. ။
အခြေစိုက်စခန်းဘူတာများအတွက် 150G DWDM မော်ဒယ် MUX DEMUX
Dense Wavelength Division Multiplex Module သည် DWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကိုအခြေခံထားပြီး ၁၅၀ ဂရမ်လိုင်းတွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၅၂၀ မှ ၁၆၂၀ မီလီမီတာအထိလည်ပတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု● Telcordia GR-1209-CORE လိုက်ဖက်သော● Telcordia GR-1221-CORE လိုက်ဖက်တဲ့ Applications များ DWDM စနစ် PON ကွန်ယက်များ CATV Links သတ်မှတ်ချက် Parameter ယူနစ် S ...
Dense Wavelength Division Multiplex Module သည် DWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ ITG Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၀၀ ဂရှိရုပ်သံလိုင်းတွင် 1520nm မှ 1620nm အထိလည်ပတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု● Telcordia GR-1209-CORE လိုက်ဖက်သော● Telcordia GR-1221-CORE လိုက်ဖက်တဲ့ Applications များ DWDM စနစ် PON ကွန်ယက်များ CATV Links သတ်မှတ်ချက် Parameter ယူနစ် S ...
အခြေစိုက်စခန်းအတွက် 1470-1610nm နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် CWDM Multiplexer
လှိုင်းအလျားခွဲခြားခြင်း Multiplex Module သည် 5G အခြေစိုက်စခန်းနှင့်လှိုင်းအလျား CWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ 2070 nm channel တွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၁၀nm သို့လှုပ်ခတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း●ကျယ်ပြန့်သောလှိုင်းအလျား - ၁၂၆၀nm မှ ၁၆၂၀nm သို့●ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန် - ၅ မှ 75 မှ ၇၅ ℃● Telcordia GR-120 ...
LGX Box နှင့်အတူ9+ 1CH CWDM
လှိုင်းအလျားခွဲခြားခြင်း Multiplex Module သည် 5G အခြေစိုက်စခန်းနှင့်လှိုင်းအလျား CWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ 2070 nm channel တွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၁၀nm သို့လှုပ်ခတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်သွင်းသွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောအထီးကျန်ခြင်း●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု● Telcordia GR-1209-CORE လိုက်ဖက်သော● Telcordia GR-1221-CORE လိုက်နာ Specification Parameter ယူနစ် Specificatio ...
8CH CWDM Mux နှင့် Demux Module
လှိုင်းအလျားခွဲခြားခြင်း Multiplex Module သည် 5G အခြေစိုက်စခန်းနှင့်လှိုင်းအလျား CWDM ကွန်ယက် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Thin Film Filter (TFF) နည်းပညာကို အခြေခံ၍ 2070 nm channel တွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၁၀nm သို့လှုပ်ခတ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအနိမ့်အမြင့်ဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားသောအထီးကျန်မှုအနိမ့် polarization ကိုမှီခိုသောဆုံးရှုံးမှု Wide Operating Wavelength: ၁၂၆၀nm မှ ၁၆၂၀nm အထိကျယ်ပြန့်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပူချိန်: -5 မှ 75 ℃မှ℃မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု Telcordia GR-1209-CORE သည် ...
လူပျို Fiber ဘက်နှစ်ဘက် Optical Circulator
Circulator သည်အလင်းပြန်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ခြင်း၊ ၎င်းကိုအာကာသအတွင်းရှိအလင်း၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှခွဲထုတ်။ အခြား port တစ်ခုမှထုတ်ပေးသော non-reversible optical transmission ကိုနားလည်သည်။ ၎င်းကို WDM MUX module နှင့် DEMUX module တို့ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး single-fiber bi-directional transmission နှင့် fiber ရင်းမြစ်များကိုချွေတာနိုင်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်သွင်းသွင်းဆုံးရှုံးမှု●အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု●ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်: -5 မှ 75 ℃မှ℃●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်မှု● Telcordia GR-1209-COR ...
Compact Coarse Wavelength Division Multiplex သည်လှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးရှိသော CWDM network applications များနှင့် 5G base station module အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CCWDM သည်လွတ်လပ်သောအာကာသနည်းပညာကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး 20nm channel တွင် ITU Grid CWDM လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၁၀nm အထိအကွာအဝေးတွင်လည်ပတ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ●အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု●မြင့်မားသောသီးခြားစီ● PDL နိမ့်●ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း●ကောင်းမွန်သောရုပ်သံလိုင်း - ရုပ်သံလိုင်းများတူညီခြင်း●ကျယ်ပြန့်သောလှိုင်းအလျား - ၁၂၆၀nm မှ ၁၆၂၀nm အထိ●မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု● Telcordia GR-1209-CORE-2001 ...